Ny fivavahana eto Madagasikara dia mitovitovy amin' ny an' ireo firenena aty Afrika atsimon' i Sahara ahitana ny fifanojoan' ny fivavahana maro samihafa izay miteraka fanao ara-pivavahana isan-karazany. Ny tena be mpanaraka dia ny fivavahan-drazana sy ny fivavahana kristiana ary ny finoana silamo. Hita koa ny fivavahana hafa toy ny bahaisma sy ny hindoisma. Efa eto Madagasikara koa izao ny jodaisma.
1.2 Fivavahana amin' ny Zanahary sy amin' ny zanahary
2.1 Ny Kristianisma
2.2 Finoana silamo eto Madagasikara
2.3 Bahaisma eto Madagasikara
2.4 Jodaisma eto Madagasikara
3 Ireo fivavahana hafa
3.1 Hindoisma eto Madagasikara
3.2 Fampifangaroana finoana
5 Azo anovozan-kevitra:
Ny Malagasy mandala ny fivavahana nentim-paharazana dia mivavaka amin' andriamanitra sy amin' ny razana. Mihoatra ny 52 %n' ny mponina no manaraka ny fivavahan-drazana izay fivavahana manantitra ny fifandraisan' ny velona sy ny maty (Razana).
Ny fivavahana manjaka isam-pirenena aty Afrika: Kristiana - Miozolmana - Animista
Tsy misaraka amin' ny tontolon' ny velona ny tontolon' ny Razana izay ivavahana ka izany no ahitana Malagasy manao fomba isan-karazany amin' ny fanamboaram-pasana sy amin' ny fanatanterahana ny famadihana amonosan-damba indray ny maty sy andevenana azy indray aorian'izay. Any Imerina sy any amin' ny faritra Betsileo no tena ahitana ny fanaovana famadihana. Izany fivavahana amin' ny razana izany dia matetika miaraka amin' ny fanandroana sy ny sikidy.
Fivavahana amin' ny Zanahary sy amin' ny zanaharyHanova
Miantso an' Andriamanitra na an' i Zanahary mpamorona sy zanahary na andriamanitra maro hafa koa ny Malagasy mandala ny fivavahan-drazana rehefa misy zavatra ataony.
Finoana silamo eto MadagasikaraHanova
Môske iray ao Fianarantsoa
Bahaisma eto MadagasikaraHanova
Jodaisma eto MadagasikaraHanova
Ireo fivavahana hafaHanova
Hindoisma eto MadagasikaraHanova
Amin' izao fotoana izao dia mbola misy ireo Malagasy izay mampirafy finoana ka mampifangaro ny fivavahana kristiana na silamo na hafa amin' ny fivavahan-drazana. Ohatra raha misy maty dia entina any am-piangonana ny razana avy eo rehefa any am-pasana dia atao ny fandevenana manaraka fomban-drazana na antsoina ny mpitondra fiangonana hanome endrika kristiana ny famadihana .
Finoana sy fomba malagasy:
Fivavahana eto Madagasikara:
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fivavahana_eto_Madagasikara&oldid=1043071"
Dernière modification le 18 Janoary 2022, à 06:22
Voaova farany tamin'ny 18 Janoary 2022 amin'ny 06:22 ity pejy ity.